तिथि मेरो पत्रु »5दिनुस् साँचो सोचता त्यो डेटिंग बारे मिथ्या
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 28 2020 |3मिनेट पढ्न
साथीहरूबाट कथामा रोमान्टिक हास्य गर्न sitcoms देखि, हामी सबै डेटिङ बारेमा सार्वभौमिक-स्वीकारे सत्य केही थाहा. तथापि, यी सबै भन्दा विज्ञान अनुसार “सत्य” गलत हो. त्यसैले तपाईं वास्तवमा के तपाईं गरेको थियो भन्दा रोमान्स बारेमा कम थाहा, अहिले सम्म.
मिथक #1: गेमरस एक्लो कुमारीको हो.
हलिउड माध्यम, हामी सबै जान्दछन् “nerdy खेलहरु एक उल्लू छोयो कहिल्यै छ” तिर्नुपरेको. थप त, हामी वचन खेलहरु लिंदा, हामी जसको रोमान्स Xbox हुन्छन् आफ्नो आमाबाबुको छिंडीमा मा भइरहेका च्याट एक धेरै पातलो वा बोसो मानिसको विचार गर्छन. विज्ञान अनुसार, यी nerdy gamers गैर-gamers भन्दा मिति मा बाहिर जाने सम्भावना बढी हो. थप, multiplayer खेल मा वृद्धि गर्न वाहेक बढ्दो गेम बजार संग, गेम वास्तवमा एक लोकप्रिय बरफ ब्रेकर बन्न छ. साथै, मानिसहरूलाई प्रेम मा भेटे र पुगेका छन् जहाँ अनलाइन खेल बारे बिर्सनुहुन्न गरौं.
मिथक #2: अनलाइन डेटिङ छैन केवल अन्तिम उपायको छ तर यो मात्र हारे आकर्षित.
दुर्भाग्यवश, कारण untruthful प्रोफाइल अलावा लागिपरेको विपणन प्रयास गर्न, अनलाइन डेटिङ वर्ष को लागि एक खराब रैप छेकेको छ. सामान्यतया, हाम्रो मन मा यो आफ्नो प्राण जोडी भेट्टाउनु गर्न अन्तिम प्रयास रूपमा सहारा गर्नुपर्छ; तथापि, यी दृष्टिकोण गलत हो. एक पाँच मा डेटिङ साइट प्रयोगकर्ता अनलाइन तिनीहरूको प्राण जोडी भेट्टाउन कि देखाएका छन् कि हाल अध्ययन भएका छन्. साथै, 94% अनलाइन सम्बन्ध बनाउन मानिसहरू दोस्रो मिति मा बाहिर हुनेछ को, जो अफलाइन पूरा मानिसहरूलाई प्रतिशत भन्दा तरिका बढी छ. किन यो छ? अनलाइन डेटिङ एक कम्प्युटर माध्यम हो किनभने, मानिसहरू हुन् अधिक इमानदार र अग्रिम हुन जान्छन् “एक कम्प्युटर कुरा”. यो कुरा सोच्नुहोस्, के तपाईं कसैसित आफ्नो हिम्मत फैल तपाईंलाई बस एक पल्ट मा भेट? अनलाइन डेटिङ गर्न अर्को ठूलो कारण यो आत्म-सम्हाल्ने र झन् लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ कि छ. तपाईं आफ्नो नै गतिविधिलाई छ जो कसैलाई भेट्न भन्ने संभावना धेरै उच्च छ.
मिथक #3: सम्बन्ध मा, महिला भावनात्मक हो र पुरुष तार्किक हो.
मानिस सधैं स्त्रीको हृदय विजेता गर्दा थाहै र फितलो स्वभावको देखिन्छ, जबकि हामी सबै अनगिन्ती चलचित्र र महिला सम्बन्ध एक मान्छे आँसु मा छोड वा चिरफार लागि खाता भनी देखाउँछ देखेका छौँ. विज्ञान मानिसहरू बढी भावनात्मक महिला भन्दा सम्बन्ध नाटक प्रभावित छन् कि भन्छन्, उनि सिर्फ यो देखाउन छैन. महिला सामान्यतया यो मान्छे समस्या आउँछ विशेष गरी करीब परिवारलाई सम्बन्ध र भावनात्मक समर्थन को एक धेरै को लागि अनुमति मित्र गर्छन. मान्छे को बस तिनीहरूलाई विशेष गरी कठिन लडाइँ बनाउन आफ्नो साझेदार पोख्न गर्छन.
मिथक #4: Feminism रोमान्स हत्या.
स्टीरियोटाइप संग feminists धेरै पुस्तौंसम्म महसूस गर्दै छन् तिनीहरूलाई पूरा गर्न सम्बन्ध वा मानिस आवश्यकता छैन जो स्वतन्त्र महिला छन् कि, यो वास्तवमा गलत छ. आफूलाई feminists विचार गर्ने महिला विपरीत लिङ्गी सम्बन्धमा थप अक्सर छैन भन्दा छन्. एक नारीवादी विवाह गर्ने पुरुष आफ्नो सेक्स जीवन छैनन् व्यक्तिहरूले भन्दा बढी सन्तोषजनक छ भनेर रिपोर्ट गरेका छन्. Feminists सामान्यतया फलालीन रूपमा देखिएका छन्, जबकि त्यसैले, वास्तवमा मामला छैन भनेर mannish महिलाहरु.
मिथक #5: विवाह अघि सँगै बस्ने जोडे अझ राम्ररी तयार छन्.
समाज सँगै ठाउँ रही एक अविवाहित जोडी पाप बाँचिरहेका छ भन्ने तथ्यलाई टाढा उत्प्रेरित गरेको छ. तर आजकल यो लगभग मनासिब. यो सम्बन्ध विच्छेद मा अन्त सक्ने कानुनी प्रतिबद्धता गर्नुअघि आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य संग मा सार्न तार्किक देखिन्छ. यो बाटो, तपाईं श्री भने बाहिर पाउन सक्नुहुन्छ. सही साँच्चै श्री छ. सही. विज्ञान अनुसार, विवाह वा संलग्नताको अघि सँगै बाँचेका जोडे एक उच्च सम्बन्ध विच्छेद दर र कम वैवाहिक सन्तुष्टि. तिनीहरूले आफ्नो सम्बन्ध परीक्षण गर्न यसलाई के भने संलग्नताको अघि घर खेल्न जोडे जो विशेष गरी बर्बाद. तपाईं आफ्नो साथी परीक्षण जस्तै लाग्छ भने संभावना छ कि तपाईं सही एक साथ छैनन् हो. खेल मा आउन सक्छ भन्ने अर्को कारक सुल्झाउन को धारणा छ. जोडे, आजकल, व्यवहार डेटिङ प्रक्रिया अर्को कदम रूपमा सँगै बस्ने. तिनीहरूले सँगै बस्ने शुरू पल्ट, तिनीहरूले यो लगभग असम्भव आर्थिक रूपमा खण्डन गर्ने र भावनात्मक तिनीहरूले सरेका छन्.
अनि त्यहाँ तपाईँले छ, अब तपाईं रोमान्स अझ बढी जान्न.
6 चलाख विवाह लागि समयमै सुझाव!
राशिफल साइन गरेर एक पहिलो तारीख मा के पहनना